Aaska maydkana ma 4.5 ayaa lagu aasayaa? – Beegsonews-Wararka maanta
Home MAQAALO Aaska maydkana ma 4.5 ayaa lagu aasayaa?
MAYDKIINA MA 4.5-BAA ?
Waan ka joogi kari waayay inaan qormadan qoro, waan eegi kari waayay sawirkan idin muuqdo. Meelo badan markaan ka eegay, lana tashaday asxaab badan waxaan go’aansaday inaanan ka baaqsan kana aamusin ihaanada iyo xaqiraadii maanta Jigjig ka dhacday, waa maydka Ilaahay ha u naxariisteen Fanaankii caanka ahaa, muusikiistihii iyo laxamiistihii weynaa Daa’uud Cali Masxaf oo maanta xitaa loo quuri kari waayay in salaada janaasada loo dad badsado.
Daa’uud waxuu ahaa shaqsi masraxa fanka soomaalida meel weyn ka gaaray, loomana waayin in ugu yaraan aaskiisa la weyneeyo, jamaacada janaasadna loo dad badiyo. Alla-bariga xabaashiisana la isugu habarwacdo. Balse sida idin muuqata waxaa xabaashiisa tagay qoyaastii afartameeyo qof. Waxaa salaada janaasada ku tukuday dad tiro yar oo qaarkood la ii sheegay inay meesha u yimaadeen aaska qof kale ay xabaalayeen.
Bal fiirso sida Abwaan Sangub Jigjiga loogu aasay sanadkii hore . Meelaha looga kala yimid. Maamuuska tacsidiisa la siiyay, tirada dadka tukaday janaasada aaskiisa.
Kaliya Daa’uud Cali Masxaf maydkiisa waxuu kaga duwanaa sida ay aaminsan yihiin kuwan sidan saaka sameeyey isagoon ahayn waa Daa’uudee beelaha sheegta inay ka badan yihiin kuwa kale ( waa sida ay iska-dhaaciyeene ).
Waa taariikh xumo, waa boog aan la ilaawi doonin oo reer Jigjiga ku ooli doonto. Waxaan qoraalkan gaaban ku koobayaa cinwaanka kore ee ah… MAYDKIINA MA 4.5-BAA ?
QALINKII CABDIRISAAQ CATOOSH